शीर्ष र ब्लाउज
पोशाक र जम्पसुट
पंत र स्कर्ट
खाई र ज्याकेट
ब्लेज़र र कोट
Zns नयाँ संग्रह - भाइरल अफ संग्रह
हामी हाम्रो नयाँ श्रृंखला भाइरल अफ स Off्ग्रह सुरू गर्न धेरै उत्साहित छौं। यस विशेष रूपमा अवधिमा आफूलाई सुरक्षित राख्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भाइरल अफ कलेक्सनले पॉलिजीन भाइरलअफ ® टेक्निकल प्रयोग गर्दछ जुन स्टाइलिश र आरामदायक व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान गर्न। भाइरल अफ मास्क र sweatshirt एआर ...
अनलाइन प्रदर्शनी सीजन आउँदैछ — परिधान सोर्सि Paris पेरिस / जादू अनलाइनमा सोर्सि।
कोरोना भाइरसले अनलाइन सेवामा धेरै प्रदर्शनहरू परिवर्तन गर्दछ। अब हामी सेप्टेम्बर २०२० मा के भाग लिइरहेका छौं निम्न २ छन्: परिधान सोर्सि Paris पेरिस (सेप्टेम्बर १,२०२० - फेब्रुअरी २,, २०२०) र MAGIC अनलाइनमा सोर्सि ((सेप्टेम्बर १ 15-डिसेम्बर १,, २०२०) परिधान सोर्सि Paris पेरिस र शल एन्ड स्का। ..
टेक्सवर्ल्ड एपिरेटेल अमेरिकामा गृह स्रोत - जुलाई २०२०
परिधान सोर्सि App न्यू योर्क शहर (पहिले परिधान सोर्सिcing यूएसए भनेर चिनिन्छ), गर्मीको अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत कार्यक्रम यस वर्ष जुलाई २१-२3, २०२० मा राखिएको थियो। अनलाइन घटनाले वैश्विक निर्माताहरूलाई वैकल्पिक प्लेटफर्मको रूपमा कार्य गर्दछ जुन अमेरिका खरीददारको साथ लगातार जडान हुने र नेटवर्क ...
सिजन एसएस २१ को लागि ZNS नयाँ संग्रह आउँदैछ!
कुनै पनि सोधपुछ, pls हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र महसुस।
हामी COVID-19 पछि कार्य गर्न पुनः सुरु गर्दै छौं, जीवनको पूर्णता!
२०-०२-१-18 मा व्यवस्थापक द्वारा
हामी COVID-19 पछि कार्य गर्न पुनः सुरु गर्दै छौं, जीवनशक्तिले पूर्ण! हामी ग्राहकहरुलाई उत्तम उत्पादन र उत्तम सेवा प्रदान गर्न जारी राख्नेछौं! आशा छ कि सारा संसार चाँडै स्वस्थ हुनेछ।
परिधान सोर्सिंग पेरिस शरद २०१umn
19-09-06 मा प्रशासक द्वारा
+86 15 १2२68848423233737
Rm१११११, टावर २, Dexin डिजिटल उद्योग बिल्डिंग, No.2008 Jinchang Rd।, Yuhang जिल्ला, 11१११ Hang१ ह Hang्ग्जो, चीन
तातो उत्पादनहरु - - साइटम्याप - - AMP मोबाइल